Xubno mucaarad ah oo berri ka soo baxaya Hiiraan | KEYDMEDIA ENGLISH
Xubno mucaarad ah oo berri ka soo baxaya Hiiraan
Cali Guudlaawe, ayaa u muuqday inuu doorashada Baladeyne, kaga adkaaday, xulfada Fahad Yaasiin ee ay hor-kacayaan Yuusuf Dabageed iyo Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan, Cali Jeyte.
BALADWEYNE, Soomaaliya – Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka heer Maamulka Hirshabelle [SEIT], ayaa muddo dheer iyo is qabqabsi siyaasadeed kadib, shaaciyay jadwalka iyo Guddiga Xulista Ergada, labo ka mid ah, kuraasta ugu miisaanka culus ee taalla Baladweyne.
War ka soo baxay Guddiga Doorashooyinka Hirshabeelle, ayaa lagu sheegay in HOP#011 iyo HOP#063, musharixiinta u baratamaya ay maanta qaadan doonaan, shahaadada Musharraxnimo, isla-markaana doorashada kuraastaan la qaban doono 22/03/2022, oo berri ku beegan.
Kala aragti duwanaan ka dhalatay doorashada kuraastaan iyo kuwo kale oo yaalla xarunta Gobolka Hiiraan, waxaa dhawaan, xilkiisii ku waayay, Guddoomiyihii Guddiga doorashada Hirshabelle Axmed Xasan Diini, kaas oo laga raacdeeyay xubinnimadii guddiga.
Diini, ayaa doonayay inuu qaar ka mid ah kuraasta u xiro shaqsiyaad gaar ah, isla-markaana meesha laga saaro, musharixiin ay ku jiraan Goodax iyo Xildhibaan Aamino, hayeeshee, Guudlaawe, ayaa is hor istaag ku sameyay damaca Axmed Xasan Diini.
Kuraastaan, waxaa Baarlamaankii 10-aad ku fadhiyay Wasiirkii hore ee Waxbarashada, Cabdullaahi Goodax Barre [HOP#063] iyo Wasiirkii hore ee Amniga, Cabdirisaaq Cumar Maxamed [HOP#011], kuwaas oo mar kale u taagan tartanka kuraasta Golaha Shacabka.
Goodax Barre, wuxuu hore u xaqiijiyay in Madaxweyne ku xigeynka Hirshabeelle, uu doonayo, in qaar ka mid ah kuraasta taalla Hiiraan loo xiro shaqsiyaad gaar ah, hayeeshee, Dabageed, ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay hadalka qaar ka md ah musharixiinta.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, oo taageeray shaqa ka cayrinta Diini, ayaa Cali Guudlaawe, ugu baaqay inuu hir-galiyo doorasho daah-furan, si looga fogaado xasarado iyo xiisado colaadeed oo mar kale ka aloosma Hiiraan.
Illa hadda, 244 kursi oo Golaha Shacabka ah ayaa la doortay, kuwaas oo 50 ka mid ah haween yihiin, kuraastaas, waxaa ka mid ah afar kursi oo FIEIT hakisay doorashadooda, 31 kursi ayaana baaqi ka ah 275 kursi ee Aqalka hoose.
Golaha Wadatashiga Qaran, ayaa hore u qorsheeyay in doorashooyinka Baarlamaanka la soo af-meero, 15-kii Maarso, [ lix maalin ka hor] hayeeshee, qorshahaas, ayaan hir galin, xilli ay sii siyaadday canaanta ka imaaneysa Mareykanka.